Degdeg:- Dagaal hadda socda iyo dad xalay lagu laayay duleedka Muqdisho + Barakac baahsan oo jira. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeSoomaliyaDegdeg:- Dagaal hadda socda iyo dad xalay lagu laayay duleedka Muqdisho + Barakac baahsan oo jira.
July 17, 2019 marqaan Soomaliya, Wararka maanta 2
Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay halka qof kale uu ku dhaawacmay markii xalay fiidkii Dableey hubeysan ay rasaas ku fureen Gaari ay dadkaasi la socdeen, waxaana dadkaan dhamaantood ay ahaayeen shacab birimogeedo ah oo aan waxba galabsan.
Weerarka ayaa ka dhacay Tuulada Xaanshooleey oo u dhaxeysa magaalada Muqdisho iyo degmada Balcad, qof ka mid ah dadka degaanka ayaa u sheegay warbaahinta gudaha in wadaha Gaariga uu diiday in uu joojiyo Gaariga sidaasna rasaasta loogu furay.
Qofkaan oo ogolaaday in magaciisa la adeegsado ayaa lagu magacaabaa Cabdullahi Maxamed Xasan waxaana uu sheegay in Waddadaas ay mar mar soo galaan koox hubeysan inta badanna habeenkii dadka ku waxyeelleeyaan kuwaas oo kulabisan dareeska ciidanka DFS.
Dhinaca kale wararka ay Marqaannews ka heleyso iska gobolka Shaeelaha dhexe ayaa waxay sheegayaan in dagaal xoogan uu hadda kasocdo Deegaanka Cali yaale oo kuyaal wadada laamiga ah ee xiriirsa Magaalada Muqdisho iyo Degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe.
sida wararka aanu heleyno ay sheegayaan Dagaalkan ayaa u dhaxeeya labo malleeshiyo beeleed oo halkaasi wada daga waxaana ay isku hayaan oo ay kku dagaallamayaan dhul halkaasi ku yaalla, iyadoona maleeshiyaadka ay helayaan gurmadyo kala duwan oo kaga imaanaya deegaano kaga baxsan halka lagu dagaalayo.
Barakac ayaa laga soo sheegayaa deegaanka iyadoona wali aysan jirin ciidamo katirsan Dowladda Somalia oo kubaxay maleeshiyaadkaan kudagaalamaya gobolka Shabeelaha Dhexe gaar ahaan deegaanka Cali-Yaale.
Wixii kasoo kordha kala soco Marqaannews
Inta dhimatay oo Muslim ahayd Ilaahay (swt) ha u wada naxariisto.Qofka dhaawacaana ha caafimaadiyo.Bal dadkaas maxay galabsadeen oo lagu laayey?Waxba ma ay dhimin ee waxaa dilay wiilashii ay soo tabo bartay USC.wiilashii lagu soo koriyey xaaraamta iyo dhiiga ummadii soomaaliweeyn.Wiilashii lagu yiri laaya ama dili soomaalida kale baa markii looga guuray xamar iyo nawaaxigeeda ku soo jeestay kuwii hubka u dhiibay.War xamar xaalkeeda fari kama qodna oo waxaaban ka baqayaa in uu dhulku la go’o ama ay baddu ku soo butaacdo xaqdaro darteed.Sababtoo ah xamar waxay caan ku noqotay meel lagu daadiyo dhiiga dadka masaakiintaa ee an isdifaaci karin. Kama wado beesha Hawiye oo dhan baa dambiile ah.Maya oo hawiye waxaa ka buuxa kumaa kun an dambiyo lahayn.Laakiin waxaa magaca madaxa ku wata dambiilashaaya soomaali laaya oo soo laayey.
Halkaas dagaalka lagu sheegay iyo Balcad waxaa daga ama u badan beesha Muuse Suudi Yalaxoow.Bilo ka hor waakii Muuse lahaa waan iska difaacayaa ciidamada dawlada ee muu maanta ku kala celiyo awoodii uu sheegtay beelihiisa is laynaya?